Umaka: b2c | Martech Zone
Ngabe Isu Lakho Lezindaba Zomphakathi le-B2B Kufanele Lihluke Kanjani Kusu Lwe-B2C
NgeSonto, ngoMashi 27, 2016 NgeSonto, ngoMashi 27, 2016 Douglas Karr
Njengoba uqhubeka nokufunda ngamasu wezokuxhumana ku-inthanethi, imininingwane eminingi ngamasu wezenhlalo igxile kwezamabhizinisi nomthengi (i-B2C). Kepha kunomehluko omkhulu phakathi kwamasu weB2C neBusiness-to-Business (B2B). Ake sixoxe ngezinye zazo: Isinqumo-Isenzi - ngenkathi isinqumo sokuthenga se-B2C singaba nemijikelezo emifushane futhi sincike kumthengi noma umbhangqwana othengayo, izinqumo zebhizinisi zivame ukuba namazinga amaningi okuvunyelwa nemijikelezo yokuthenga isikhathi eside. Imiphumela -
Le infographic evela kuTamba, i-Content Marketing Revolution, icishe ibe neqoqo elihle kakhulu lezibalo zombili amabhizinisi e-B2B ne-B2C ukwenza izizathu zokukhulisa imizamo yabo nezindleko kumasu wokumaketha okuqukethwe. Kuyathakazelisa ukuthi, cishe uhhafu wazo zonke izinsizakalo zokubhala nezokuklama zithunyelwa ngaphandle kochwepheshe bokuqukethwe. Qiniseka ukuthi ufunda okuthunyelwe kwethu okujulile kokuthi kuyini ukumaketha kokuqukethwe nokuthi ungalakha kanjani isu lokumaketha lokuqukethwe. Futhi-ke thintana nokuqukethwe kwethu
Izindlela ezi-5 Zokulawulwa Kwe-oda Okusekelwe Emafini Kukusiza Usondele Kumakhasimende Akho
NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2015 NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2015 IChip House
U-2016 uzoba unyaka weKhasimende le-B2B. Izinkampani zazo zonke izimboni seziqala ukubona ukubaluleka kokuletha okuqukethwe okwenzelwe wena, okugxile kumakhasimende nokuphendula izidingo zabathengi ukuze zihlale zifanelekile. Izinkampani ze-B2B zithola isidingo sokulungisa amasu wazo wokumaketha umkhiqizo ukushwelezela ekuziphatheni kokuthenga okufana ne-B2C kwabathengi besizukulwane esisha. Amafekisi, amakhathalogi nezikhungo zezingcingo ziyaphela phakathi kwezwe le-B2B njengoba i-eCommerce iguquka ukubhekana kangcono nezidingo zabathengi ezishintshayo.